XOG:- Ciidanka nabad-sugidda ee garoonka Aadan Cadde oo gacanta ku dhigay lacag dhan 3 milyan doollar – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Ciidanka nabad-sugidda ee garoonka Aadan Cadde oo gacanta ku dhigay lacag dhan 3 milyan doollar
Warar hoose aynu ka heleyno garoonka diyaaradaha Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ayaa inoo sheegaya in ciidanka nabad-sugidda qaranka ee ku sugan garoonkaasi ay maanta gacanta ku dhigeen lacag dhan 3 milyan oo doollar oo ay leedahay shirkadda Dahabshiil.
Lacagtaasi ayaa la sheegayaa in la qabtay xilli la saari lahaa diyaarad rakaab oo kusii jeeday magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaas oo ay ka socdaan doorashada xubnaha Galmudug ee Aqalka hoose baarlamaanka Soomaaliya.
Ciidanka nabad-sugidda qaranka ee ku sugan garoonka Aadan Cadde oo baaritaano dheeraad ah ku sameeyay waxa ay lacagtaasi ahayd iyo meeshii ay ku socotay ayaa ugu dambeyn la sheegay inay fasaxeen, iyadoona la sheegayo in shirkadda Dahabshiil ee Cadaado maalmihii ugu dambeysay laga waayay wax lacag oo doollar ah.
Arrintaas ayaa kusoo beegmaysa xilli musharixiin iyo siyaasiyiin badan ay ku sugan yihiin magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud, halkaas oo la sheegayo in siyaasiyiintaasi lacagaha loogu soo xawilo shirkaddaas.
Siyaasiyiintaasi ayaa la sheegayaa in lacagahaasi ay u adeegsadaan ololahooda doorasho, si ay ugu guuleystaan xubnaha maamulka Galmudug uga mid noqon doona Aqalka hoose ee baarlamaanka soo socda ee Soomaaliya.
DIGNIIN:- Fadalan Dhowr Xuquuqda Qoraalka